Automatic Packer၊ Tube Mill Supplier၊ China Cold Cutting Saw - TUBO
Hebei TUBO Machinery Co. , Ltd. သည်ဂဟေဆော်သောထုတ်လုပ်သည် ERW Tube Mill / Pipe Mill, LSAW (JCO) ပိုက်စက်၊ အအေးကြိတ်စက်စက်နှင့်ဖြတ်လိုင်း၊ ထက်ပိုမိုများအတွက်အရန်ပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ် ၁၅ နှစ် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောစျေးကွက်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဖွံ့ဖြိုးပြီးကြီးထွားလာသည်။
morden ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ပိုပြီး 130 သည်စီဒီစီစက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကိုသတ်မှတ်သည်, TUBO Machinery သည်လယ်ပြင်၌၎င်း၏နည်းပညာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။ အားဖြည့်ပေးခဲ့သည်။
ထုတ်ကုန် ၈၀ ကျော်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်၎င်းကိုကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ပိုက်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ အအေးခံခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်းစသည်တို့ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ကုန်ကြမ်းကွိုင်ကျယ်ကိုကျဉ်းမြောင်းသောဘောင်းဘီများအတွင်းသို့ဖြတ်တောက်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းလိုင်းသည်အခြားသတ္တုများမပါ ၀ င်နိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Process Flow Loading Coil → Uncoilling → Leveling → Head and End ဖြတ်တောက်ခြင်း→ Circle Shear → Slitter Edge Recoilling → Akkumulator →သံမဏိနှင့်အဆုံးကွေးခြင်း→ Separating → Tensioner → Coilling Machine Advantage 1. အဆင့်မြင့်သောအလိုအလျောက်အဆင့်အထိ ...
၃၀၀ * ၃၀၀ မီလီမီတာတိုက်ရိုက် ...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်စတုရန်း (သို့) စတုဂံပုံသဏ္shာန်ပုံသဏ္theာန်ကိုဂဟေဆော်ခြင်းမပြုလုပ်မီဖွဲ့စည်းသည်။ Process Flow သံမဏိ Coil → Uncoiling → Plattening / leveling → Shear & End ဖြတ်တောက်ခြင်း→ Coil Accumulator → Forming → Welding → Deburring →ရေပေါင်းစပ်ခြင်း→အရွယ်အစား→ Straightening →ဖြတ်တောက်ခြင်း→ထွက်ကုန်စားပွဲတင်အားသာချက် 1. Round နှင့် square and rectangle ဖွဲ့စည်းသည့်လမ်း၊ ဤနည်းသည် Cross section ၏ပုံသဏ္forာန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြစ်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ချက်အနေဖြင့်အတွင်းစိတ်ရှိအချင်း ၀ က်အချင်းမှာသေးငယ်ပြီးအကန့်များသည်အပြားဖြစ်သည်။
250 * 250mm တိုက်ရိုက် ...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်စတုရန်း (သို့) စတုဂံပုံသဏ္shာန်ပုံသဏ္theာန်ကိုဂဟေဆော်ခြင်းမပြုလုပ်မီဖွဲ့စည်းသည်။ Process Flow သံမဏိ Coil → Uncoiling → Plattening / leveling → Shear & End ဖြတ်တောက်ခြင်း→ Coil Accumulator → Forming → Welding → Deburring →ရေပေါင်းစပ်ခြင်း→အရွယ်အစား→ Straightening →ဖြတ်တောက်ခြင်း→ထွက်ကုန်စားပွဲတင်အားသာချက် 1. Round နှင့် square and rectangle ဖွဲ့စည်းသည့်လမ်း၊ ဤနည်းသည် Cross section ၏ပုံသဏ္forာန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြစ်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ချက်အနေဖြင့်အတွင်းစိတ်ရှိအချင်း ၀ က်အချင်းသည်သေးငယ်ပြီးအကန့်များသည်အပြားဖြစ်သည်။
150 * 150mm တိုက်ရိုက် ...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်စတုရန်း (သို့) စတုဂံပုံသဏ္shာန်ပုံသဏ္theာန်ကိုဂဟေဆော်ခြင်းမပြုလုပ်မီဖွဲ့စည်းသည်။ Model LW600 (150x150mm) ရင်ပြင်နှင့် Rectangular Tube Mill သို့တိုက်ရိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်းစတုရန်း (သို့) စတုဂံပုံသဏ္ingာန်ကိုပြွန်ဂဟေဆော်ခြင်းမပြုမီဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ စွမ်းအင်နှင့်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရာတွင်အရေးကြီးသောအားသာချက်များရှိသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှုသံမဏိကွိုင်မှရုတ်သိမ်းခြင်း။ သတ္တုစပ် (Uncoiling)၊ ပြားချပ်ချပ် / ညှိခြင်း (သို့) ညှပ်ခြင်းနှင့်အဆုံးဖြတ်ခြင်း→ကွိုင်စုဆောင်းခြင်း→ပုံသွင်းခြင်း→ဂဟေဆော်ခြင်း→ Deburring →ရေကြွေခြင်း→အရွယ်အစား→ဖြောင့်→ Cutt ...
ထုတ်လုပ်မှုဖော်ပြချက် ERW165 Tube mill / pipe mi ...
ထုတ်လုပ်မှုဖော်ပြချက် ERW89 Tube mill / pipe Mil ...
(၄.၀ မှ ၁၆.၀) × 2200mm Sli ...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်အညွှန်းကို အသုံးပြု၍ ...
Spiral Welded Pipe နှင့် Straight Welded Pipe ပိုက်အကြားခြားနားချက်
လိမ်ပိုက်ဂဟေပိုက်နှင့်ဖြောင့်ဂဟေပိုက်၏ဂဟေဆက်ထားသောပိုက်နှစ်ခုအကြားအဓိကကွာခြားချက်မှာဂဟေပုံစံကွဲပြားမှုဖြစ်သည်။ Spiral welded pipe သည်ကာဗွန်ကာဗွန်နိမ့်ကာဗွန်သံမဏိကိုယ်ထည် (သို့) အနိမ့်အလွိုင်းဖွဲ့စည်းထားသောသံမဏိအချောင်းတစ်ခု (hell) ထောင့် (hells) ထောင့်အချို့ (ပုံစံဟုလည်းခေါ်သည်) သည်။
ကြိမ်နှုန်းမြင့်ဖြောင့်ချုပ်ရိုးချုပ်ဂဟေပိုက် (ERW) သည်စက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအပူလိပ်ထားသောကွိုင်ပြားဖြစ်ပြီးအရေပြားအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းစီးဆင်းမှု၏နီးကပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြု၍ ပြွန်အစွန်း၏အစွန်းကိုအပူနှင့်အရည်ပျော်စေရန်နှင့်ဖိအားဖြင့်ဂဟေဆော်ခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ညှစ်။ ကြိတ်စက် \_ t